Xaflad lagu Abaal-Marinayo Arday Quraanka baratay iyo kuwa kaalmaha hore galay ayaa lagu qabtay Dugsiga Khulafaa. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xaflad lagu Abaal-Marinayo Arday Quraanka baratay iyo kuwa kaalmaha hore galay ayaa lagu qabtay Dugsiga Khulafaa.
July 15, 2019 - By: Mohamud Nadif
Maamulka Dugsiga Khulafaa Raashiduun Magaalada Qardho ayaa xaflad abaal-marin ah u sameeyay ku dhawaad 70 arday oo isugu jira kuwa bartay Quraanka Kariimka, kuwa kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka dugsiga ee aasaasiga ah iyo ardayda kaalmaha ku galay akhalaaqda.
Sheekh Cabdalla Huruuse Aden Maamulaha Dugsiga Khulafaa waxa uu ka warbixiyay marxaladaha uu dugsigu soo maray, Sheekhu wuxuu tilmaamey in ardayda dugsigaan kasoo baxdo ay ka sheegan-yihiin meelaha ay u doontaan tacliinta dhexe iyo mida sare.
Wuxuu sheegay in sanadadii lasoo dhaafay ay dadaal ku bixiyeen sidii ay u horumarin lahaayeen tayada tacliinta dugsiga ayna ku guuleysteen, Sheekhu wuxuu tilmaamey in Abaalmarinta ay maanta bixinayaan ay tahay mid lagu dhiirigelinayo Ardayda dadaalka dheeraadka ah sameeyay.
Qaar ka mid ah Madaxdii, Waalidkii iyo Masuuliyiintii ka qaybgalay xaflada waxay si qoto-dheer ugu dheeradeen kaalinta uu horumarka Magaalada iyo Xaafadaha uu ku yaala ka qaatay dugsiga Khulafaa, Waxay ku bogaadiyeen maamulka iyo Macalimiinta dadaalka ay wadaan.
Kormeeraha guud ee Wasaarada Waxbarashada Gobolka Karkaar Mahad Gacayte oo ugu danbays goobta ka hadlay waxa uu waalidiinta faray in ay ubadka kula dadaalaan tacliinta. Intaasna aysan uga harin.
Dugsiga Khulafaa Raashiduun ayaa ka mid dugsiyada ugu tayada sareeya xagga tacliinta Degmada Qardho, waana xarun ay kasoo aflaxeen arday si fiican u baratay quraanka kariimka ah, Sidoo kale masjidka Khulafaa ayaa laga akhriyaa kutub iyo wacdiyo ay dadka xaafadu ku xiran yihiin.